Uyini futhi kanjani umfula wesihlabathi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esinye sezimo ezimangalisa kakhulu ezasakazeka emhlabeni wonke ngesokuthi umfula wesihlabathi. Futhi ukuthi ngumfula othile ngoba awuthwali amanzi, kepha isihlabathi. Kwakunemibono eminingi ngalesi simo nokuthi kungenzeka ukuthi yayivelaphi. Kwenzeka e-Iraq nangevidiyo eyasakazeka emhlabeni wonke. Abantu abaningi bathi bekuyingxenye yohlobo lwe-apocalypse ngoba kuyinto engajwayelekile.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi imvelaphi eyiqiniso nokuthi umfula wesihlabathi uneziphi izici.
1 Isimo sezulu esingajwayelekile
2 Iqiniso lomfula wesihlabathi
3 Wakhiwa kanjani umfula wesihlabathi
Isimo sezulu esingajwayelekile
Isifunda sase-Iraq sivelela isimo sezulu esomile lapho benenani elikhulu lomhlabathi onesihlabathi. Lapho kwenzeka khona lesi simo kwaba ugwadule iRub al Khali, idume ngokuba ugwadule olukhulu lwesihlabathi emhlabeni wonke. Lesi simo semvelo esixakile sabanjwa ngumlandeli wevidiyo futhi ezinsukwini ezimbalwa ividiyo yaya emhlabeni wonke. Kuvidiyo ungabona isimanga semvelo lapho ungabona khona ukuthi umfula wesihlabathi ugeleza kanjani phakathi kogwadule.
Ngokusobala lolu hlobo lwesimanga semvelo olungajwayelekile ludonsa ukunaka kwabo bonke abantu bendawo ngoba kubonakala kuyinto engaphandle kwemingcele yemvelo. Lapho kunesiphepho sesihlabathi ogwadule, kuvamise ukuhamba amakhilomitha amaningi ngenxa yomoya onamandla. Kodwa-ke, uma sibuka le vidiyo siyabona ukuthi awukho neze umoya nokuthi isihlabathi sigeleza kanjani embhedeni womfula kube sengathi uketshezi. Ingabe lokhu kungaba ngokoqobo?
Iqiniso lomfula wesihlabathi
Kumbuzo wokuthi ngabe le nto ingaba ngokoqobo noma cha, kufanele uthi cha. Okugeleza ngempela njengomfula akusona isihlabathi kodwa idlanzana elihle lamatshe esichotho. Le vidiyo ingabonakala njengomunye wofakazi balo mfula wesihlabathi ofinyelela isandla sakhe njengamanje futhi asuse okubonakala kuyisichotho esincane.
Futhi ngukuthi ngaleso sikhathi amaphethini wesimo sezulu ahlukile kakhulu aqoshiwe, afaka isichotho. Kumele sikhumbule ukuthi indawo eseMpumalanga Ephakathi yomile futhi imvamisa ayinalo lolu hlobo lwesimanga. Isifunda lapho kutholakala khona lo mfula wesihlabathi ivelele ngokuba nesimo sezulu esomile. Kodwa-ke, ishaywe yimvula esabekayo nesiphepho esinamandla esidale isichotho esilingana namabhola egalofu. Ngenxa yokuthi isimo sezulu simbi kakhulu, zonke izakhamizi zaziswa ngengozi yokulimala kulezi ziphepho.
Bekuvele kungemva kwesiphepho lapho kubonakala umfula wesihlabathi nokungalindelekile. Iqiniso langempela lomfula yilokho okungaphansi kwalesi sikhathi samanje. Okubukeka njengokugeleza okuqhubekayo kwesihlabathi okufana nezimo zomfula yiqhwa. Ogwadule bahlangana amabhlogo amakhulu eqhwa azohamba ngokushesha kuwo wonke iMiddle East. Futhi ngukuthi usayizi wamabhola esichotho wawumkhulu kakhulu kangangokuthi wawuqhubeka ngokuqhubekayo ngenkathi uncibilika. Umfula wesihlabathi awulutho ngaphandle kwenani elikhulu lamatshe esichotho ahamba emfuleni.
Wakhiwa kanjani umfula wesihlabathi
Lokho ekuqaleni okwasakazeka ngokweqile njengomfula wesihlabathi eSaudi Arabia kwakungafani nalokho ngokuphelele. Into yokuqala ukuthi kwakungekho eSaudi Arabia, kodwa e-Iraq. Ekupheleni kuka-2015, izimvula ezinamandla neziphepho ezinamandla kakhulu zahlaselwa ezweni lonke lapho into ejwayelekile kakhulu ukuthi ukushisa kukhulu kakhulu ngisho nangaleso sikhathi sonyaka. Yonke imifula nemifudlana yachitha konke okwakuqukethwe ngamatshe esichotho phezu kwemifula i-Ewufrathe neTigrisi. Ukuthi amazinga okugeleza azokwenyuka futhi bazohudula wonke la mabhola esichotho ngasikhathi sinye ebencibilika ngenxa yamazinga okushisa aphezulu.
Njengoba la matshe esichotho ayegeleza ezindaweni ezinesihlabathi, ayenombala wesihlabathi. Uma uyibuka ukude uyabona ukuthi ibukeka njengomfula wesihlabathi nokuthi yakhiwe ngayo. Kodwa-ke, uma ususondele kulokhu kugeleza okuqhubekayo bese ufaka isandla sakho uyabona ukuthi ngamabhola esichotho.
Lezi zimo zesimo sezulu ezedlulele zenzeka ngamandla amakhulu okuvama ngenxa yezinkinga zemvelo zomhlaba ezifana nokuguquka kwesimo sezulu. Le nto eyenzeka e-Iraq nayo yayihambisana nelinye lamahlobo ashisayo aholela amazinga okushisa afinyelela kuma-degree angama-52 eBaghdad.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokwakhiwa nemvelaphi yomfula wesihlabathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umfula wesihlabathi
Ngubani obhale lo mbhalo uyazi ukuthi ihlane olishoyo alikho e-Iraq? IRub al Khali iyihlane eliseningizimu yenhlonhlo yase-Arabia, futhi idlulela eSaudi Arabia, Oman, Yemen nase-Emirates.
Ngakho-ke okuthile akulungile endatshaneni….
Edgar m cruz kusho
Ukuthi isichotho sakhanselwa kanjani ukugeleza x ipayipi elilodwa noma amabili okuyiTigrisi ne-Ewufrathe
Phendula u-Edgar m cruz